❤ I-Appartistic - Ifulethi labaculi ❤
Ifulethi lethu lisosebeni lwe-Erdre, eduze nendawo yokungena esiqhingini saseVersailles. Kuyindawo ekahle yokujabulela impilo enhle yaseNantes. Inkampani eqashisa ngamabhayisikili iseduze kwakho!
Sikhethe ukuhlobisa ifulethi lethu ngemisebenzi yomdwebi esiwazisa kakhulu - ukudweba nokuthwebula izithombe!
Uzojabulela igumbi lokulala elithule ngemuva kwendlu.
I-tram stop 80m away ivumela ukufinyelela okusheshayo esikhungweni kanye nesiteshi sesitimela se-SNCF.
Ukulungiswa okuphelele kanye nemishini emisha yefulethi, eqedwe ngo-Ephreli 2019. Ilungele ukuhlala kamnandi ngenkathi ujabulela isikhungo saseNantes (uhambo olungaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka esontweni). Igumbi lisendaweni engemuva ethule, futhi ungavuka uthande izikebhe e-Erdre ngenkathi udla isidlo sasekuseni egumbini lokuphumula.
Umatilasi wekhwalithi ephezulu wombhede, kodwa nombhede kasofa (oklanyelwe ukulala kwansuku zonke, umatilasi ongu-17cm).
Jabulela gijima noma ube ride bike eduze Erdre (ifakwe nabahamba, futhi ibhayisikili sokuqasha eduze ngokushesha) kokushiya nje efulethini, ukuhamba ezindleleni le khaya elinokuthula ukuthi iyona Isiqhingi SaseVersailles, izihlahla zalo, izingadi, izimpophoma (ukungena esiqhingini kuyi-100m ukusuka efulethini). I-Kayak noma ukuqashwa kwezikebhe zikagesi kuyatholakala esiqhingini. Izindawo zokudlela eziningi ezisezingeni eliphezulu eduze kwefulethi. Ngesikhathi esifanayo, sebenzisa ithuba lokuba seduze kwesikhungo se-hyper (isibonelo, kuthatha uhambo olufushane lwemizuzu engu-15 ukuya eMnyuziyamu Yezobuciko Ezinhle) nempilo yaseNantes!
Esimeni lapho singekho, u-Grégoire no-Fanny, abavela ku-"BNB FACILE", bazohlela nawe ukunikezelwa kokhiye. (Ukwanda kwe-20 € ngemuva kwe-8: 00 p.m.).
Ukuhamba kumahhala ekuseni ngaphambi kuka-11:00 a.m.
U-Grégoire uzonakekela ukuphendula yonke imibuzo yakho ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ukuhamba kumahhala ekusen…